အဆုံးစွန်စီးပွားရေး Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: လာရောက်လည်ပတ် Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို |
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အဆုံးစွန်စီးပွားရေး Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: လာရောက်လည်ပတ် Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
အဆုံးစွန်စီးပွားရေး Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: လာရောက်လည်ပတ် Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို APK ကို
အဆုံးစွန်စီးပွားရေး Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို:
တစ်ဦးကဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့လက်ဖဝါး၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနေရာ, အခုဆိုရင်သင်အလွယ်တကူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ app ကို အသုံးပြု. စက္ကန့်၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ကိုဖနျတီးနိုငျသညျ။လိုအပ်မျှဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှု - သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ app ကိုအတူလွယ်ကူသောလုပ်ပါ။ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Get သို့မဟုတ်သင့်လက်ချောင်းထိပ်မှာကဒ်သွားရောက်လည်ပတ်။
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ထောင်ရန်, သင့်ရဲ့အထောက်အထားမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ လည်ပတ်ခြင်းကို / လုပ်ငန်းကတ်ဈေးကွက်ထဲမှာစီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုထူးခြားတဲ့စျေးကွက်နည်းဗျူဟာပါပဲ။ လှပပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းကိုတင်းပလိတ်များ အသုံးပြု. စက္ကန့်၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ကိုဖန်တီးပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုလည်းအမှတ်တံဆိပ်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား, ပိုစတာဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားနှင့် Flyer ဒီဇိုင်နာ & Thumbnail သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုပလီကေးရှင်းများ Key ကိုအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ သငျသညျဒီဇိုင်နာကို အသုံးပြု. သင်၏လုပ်ငန်းကဒ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်ခြစ်ရာကနေသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ကိုဖနျတီးနိုငျသညျ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည် -
- စိတ်အားနှင့်သင့်ဖန်တီးမှုမြှင့်တင်ရန်သော mini ကိုစတူဒီယို။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို Features: -
- Built-in စတစ်ကာစုဆောင်းခြင်း, နောက်ခံ, အဆင်းအရောင်နှင့်အခြားဆိုးကျိုးများ။
- Save နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကိုသုံးပြီး businesscard မျှဝေပါ။
သငျသညျဖနျတီးနိုငျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်များ2အမျိုးအစား: -
- Standard Card ကို
- ဒေါင်လိုက် Card ကို
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်: - စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုနည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် -
1 ။ ဒီဇိုင်နာကိုအသုံးပြုပြီးစီးပွားရေး Card ကို Create: (Fast & လွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်အတွက်)
- ဒီဇိုင်း (သင် re-ပြင်ဆင်ရန်ပေးနိုင်ပါတယ်) အဖြစ်သို့မဟုတ်ပုံရိပ်အဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ။
2 ။ Scratch ကနေစီးပွားရေး Card ကို Create: (ကဒ်သို့ကိုယ်ပိုင် Idea ပြောင်း)
- စီးပွားရေး Card ကိုစတိုင် (သို့မဟုတ် Standard ဒေါင်လိုက်) ကိုရွေးချယ်ပါ
- စာသား, စတစ်ကာများ & နောက်ခံ Add
- အရောင်, မထင်ရှားသော, ဖောင့်, လည်ပတ်, 3D ဆိုးကျိုးများနှင့်အခြားဆိုးကျိုးများ Apply ။
- ဒီဇိုင်း (သင် re-ပြင်ဆင်ရန်ပေးနိုင်ပါတယ်) အဖြစ်သို့မဟုတ်ပုံရိပ်အဖြစ် Seve ။
ဒီ app ကိုသင်၏လုပ်ငန်းကွန်ရက်များအဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ digital identity နဲ့ E-card ကိုကဲ့သို့သူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
အခမဲ့အဘို့ဤအံ့သြဖွယ် app ကိုကြိုးစားပါနှင့်ငါတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက် & အကြံပြုချက်မျှဝေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာသိပါရစေ။
တင်းပလိတ်များကိုစာသားတည်းဖြတ်ရေး / အရောင် bug ကို-ပြင်ဆင်ချက်
အဆုံးစွန်စီးပွားရေး Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: လာရောက်လည်ပတ် Card ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
18.38 ကို MB